Cryptopay Debit Card Review - Bitcoin Card Kuenzanisa 2018
Cryptopay chinopa nyore nzira kupedza BitCoins ako pose. Users vanogona kubatsirwa zvakanakira ari bitcoin samambure apo streamlining shanduro mari uye hedging pamusoro pamusika masangano. Sevhisi zvaipiwa Cryptopay anopa vanozvishandisa nokukurumidza uye vakasununguka kuwana bitcoin kubhadhara. Visa debit kadhi nekanzuru kambani kunotsigirwa pamwe bitcoin zvakafanana kuti vanhu vanogona kushandisa kumusoro paIndaneti kutenga kana withdrawals kubva ATMs.
Services inopiwa Cryptopay
Users anogona kutenga, tengesa uye chitoro BitCoins muna Cryptopay kuti bitcoin chikwama pamusoro FLEX nhoroondo. Mushure unobva akaundi kuchikuva, vanokwanisa exchange EUR, GBP kana USD zvakafanana munzvimbo BitCoins. The chikwama rakagadzirwa nenzira kurega vatengi achengetere siyana mari mari mukati chete nhoroondo. Izvi zvinoita kutumira nokutambira mari kubva kunze kwenyika zvizhinji vasununguka ruzivo.
Cryptopay nyaya Visa debit makadhi kupa is mari mikana avo pakuva BitCoins. Makadhi vanogamuchirwa zvachose Pos zviteshi apo vhiza makadhi vanogamuchirwa. Izvi zvinoreva vatengi zvinogona kana kubhadhara paIndaneti kana is pane mamiriyoni vatengesi munyika yose. Kunze chinyakare vhiza makadhi kuti vane chips nembambo, vanokwanisa zvakare Navi rakapotsa makadhi, izvo vanogamuchirwa se dzakawanda sezvo mapurasitiki makadhi.
Nhoroondo zviyero inogona zvikamu naye zvavo akaundi anotamisa. Maakaundi Okubhengi kodzera mukati 28 SEPA nyika muEurope, asi makadhi zvinogona akarayira kunze Eurozone zvakare. Panguva iyi, vatengi muUnited States kana India havagoni rayirai debit kadhi wakabudiswa Cryptopay. Kunze United States, kambani inosiya chimwezve 120 nyika kubva mabasa avo, kusanganisira vakaroorana Nyika muAfrica uye kuMiddle-East.
Visa debit makadhi anotumirwa pose vakasununguka kana mureza basa anosarudzwa. Wenhevedzo unoitwa kubudikidza Website, mutengi anogamuchira debit kadhi mukati 2-3 masvondo mu Europe uye 3-5 mavhiki ari mamwe shoko. Kana aiva pakukurukura nezvechisarudzo anosarudzwa, vatengi vanogona kugamuchira akarayira makadhi mukati 3-10 Mazuva ive zvakawandisa muripo weUS 75 USD.
Plastic makadhi mutengo 15 USD, Virtual makadhi vari 2.5 USD. Mapurasitiki Makadhi kubvumira Verified vanoshandisa ngavabude zuva 2,000 USD kubva ATMs uye pane 10,000 USD muganhu chete pamusoro kupota. Asi hapana muganhu kana zvachose withdrawals, kana pamusoro kumusoro mari pamusoro rokukwidza pakuenzanisa.
Cryptopay anopa kuti User chawo kusarudza kushandisa mabasa ayo pasina ongororo zvakare. Kana zvakadaro zvisinei kuti miganhu ATM withdrawals uye topups vari yekudyidzana chiduku. Unverified vanoshandisa vanogona kutora 400 USD daily kubva ATMs, asi chete mune yaipedzerwa 1,000 USD munyika oupenyu wekuenda.
Nokuti zvose achasimbiswa uye unverified vanoshandisa, vatengi vanokwanisa kutora mari kubva ATM maviri chete nguva pazuva. Mhiri, zvose mhando vanoshandisa anogona kushandisa Cryptopay debit makadhi risingaperi nguva paIndaneti kutenga.
Cryptopay mhosva 1% vose bitcoin nokutendeuka kubva uye kupinda Fiat mari. The yakachipa pashiri nzira vapinze nhoroondo mwero pamwe pamusoro-panzvimbo Cryptopay vachizvitakudza turusi, nekuti zvimwe kuchikuva akapa chimwezve 0.99% kushandisa chechitatu-party mabasa. Nokuti vachidzikisa Makadhi pane imwe muripo weUS $ / € / £ 0.10 parutivi 1% murandu.
Users vanofanira kuteerera muzasi mari yacho Cryptopay kadhi sezvo pane chimwezve 3% tema ari vatorwa kwema. Kana vatengi achida kubhadhara kana kutora mari yakasiyana mari pane muzasi mari yacho kadhi iri 3% vatorwa kutengeserana kubhadhara akapiwa.
The muripo weUS ATM withdrawals nezvezvipfuwo uye dzakawanda kwema mu euros zvakafanana € 2.25. Zvisinei kana mujinga mari yacho Cryptopay kadhi zvakasiyana pane zvakataurwa ATM anopa, pane yepamusoro vachibhadharisa pakuchinja dzakawanda kwema muna GBP uye USD.
The bitcoin mitengo hadzina mhindu panguva zhinji shoma uye makwikwi / kupa kumahombekombe anonzwisisa. Semuyenzaniso, Cryptopay akapa BitCoins kuti 775.84 - 783.49 USD bhidha-kumbira, ukuwo BTCUSD mutengo yakanga 785.94 pa Coinbase uye 779.67 pa Bitstamp.
Pane zvinhu zvinoverengeka mari zvinoshanda kuti utilizing uye rokukwidza Cryptopay debit kadhi.
Cryptopay Plastic Prepaid Card – Price uye Fees
Card mutengo uye mari
Card mutengo € 15.00 £ 15.00 $15.00
Standard dhirivahari yose Free Free Free
Ratidzai dhirivahari yose € 70,00 £ 50,00 $75.00
Domestic ATM mutengapwe € 2.25 £ 1.75 $2.50
International ATM mutengapwe € 2.75 £ 2.25 $3.50
Foreign mutengapwe kubhadhara 3% 3% 3%
Monthly basa kubhadhara € 1.00 £ 1.00 $1.00
Loading kubhadhara 1% 1% 1%
Third-party vachizvitakudza kubhadhara 1.99% 1.99% 1.99%
Cryptopay Virtual Prepaid Card – Price uye Fees
Card mutengo € 2.50 £ 2.50 $2.50
Foreign mutengapwe Fee 3% 3% 3%
Cryptopay kwakaita Website ane akashambidzika, rakabatana yebhuruu Kutarira. Rwendo iri nokuita panzvimbo.
The kunyoresa chete anotora miniti imwe. Mushure kupa zita, kero ye email uye pasiwedhi, vanokwanisa login kupinda papuratifomu. Kuti asimbise nhoroondo vanoshandisa anofanira kupa hurumende yakabudisa ID kadhi (pasipoti, National ID kana uchityaira rezinesi) uye uchapupu narini. Nokuti uchapupu mugari wemo Bank mashoko, utility bhiri, mutero kudzoka kana hurumende yakabudisa chitupa mugari wemo vabvuma. Verification anotora maawa mashomanana.
After Login, vanokwanisa kuona pakuenzanisa nhoroondo. mumwe mari (EUR / GBP / USD) anopiwa yoga bitcoin kero apo vatengi anogona vapinze bitcoin zviyero. Pane vakaparadzana Tabs kuti tama mari kuti bitcoin kero, nokuti vachizvitakudza uye vachidzikisa nemakadhi. Pakuyerwa inogona kutorwa mumwe bitcoin chikwama kana kuti chokuita kubhengi nyaya pasi Tumira chikamu. Zvivabatsire Tab Ngatitaurei vanozvishandisa kukoka shamwari basa kuti kugamuchira 10% kwemari mugove ukuwo shamwari anogona kushandisa Cryptopay debit kadhi kuti 25% dhisikaundi.
Kana chero mubvunzo simuka, pane kutsvaka basa iri FAQ muchikamu. Cryptopay anopawo Live Chat rutsigiro kana paine nyaya hazvigoni kugadziriswa kuburikidza neindaneti.
Users sokuti kukufarira Cryptopay zvakanyanya. Dzinorumbidza bhizimisi pfungwa pamwe Website. The chete akaipa inofambiswa kutaurwa yakanga kuti mutengi anotsigira mabasa muna UK nguva mapazi chete kuti aigona kuva nemusoro kwemakungwa vatengi.
Cryptopay Account nemiganhu
Kukosha paIndaneti kwema
Unverified / rukasimbiswa € 1,000.00 / Unlimited £ 800,00 / Unlimited $1,000.00 / Unlimited
Third-party mitoro iripo
Unverified / rukasimbiswa Aihwa / Ehe Aihwa / Ehe Aihwa / Ehe
Max chete pamusoro-up ukoshi
Unverified / rukasimbiswa € 1,000.00 / € 10,000.00 £ 800,00 / £ 8,000.00 $1,000.00 / $10,000.00
Max daily mutoro
Unverified / rukasimbiswa € 1,000.00 / € 20,000.00 £ 800,00 / £ 16,000.00 $1,000.00 / $20,000.00
Max hwose mutoro
Max hwose Kudzikisa
Unverified / rukasimbiswa 2 / Unlimited 2 / Unlimited 2 / Unlimited
Cryptopay.me rave nheyo muna October 2013 mbiri duku bitcoin nechido. George Basiladze Ane MsC mu mari, akanga akawanda tsvakurudzo muongorori ruzivo panguva Russian mubhizimisi yemakambani ane zvakadzama ruzivo mari nehurongwa. Dmitry Gunyashov ane 7+ Makore munhoroondo mukuvaka e-zvokutengeserana mabhizimisi uye zvinobudirira akakwanisa kugadzira basa vakawanda mubhadharo enyika kare. Chekambani Headquarter kunobva muLondon, vakomana vari kushandisa yebhizimisi kubva UK mazuva ano. The kambani akatotanga rakapa kupfuura 37,000 debit kadhi, vane 167,000 vanoshingaira vanoshandisa shoko-pose pazvinenge 100,000 kwema pamwedzi pamwe mabasa Cryptopay raMwari.
The zvikuru kubatsira Cryptopay ndechokuti kupa basa matatu makuru dzeEurope EUR, GBP uye USD uye vari kutumirwa visa kadhi akasununguka nyika yose. The Website inovakwa zvakanaka yakagadzirwa. Zvisinei nekuti mutengo purogiramu zvishoma kupfuura avhareji zvichienzaniswa vakwikwidzi, vanozvishandisa vanofanira funga kana vachida kushandisa zvose mari matatu uye kana zviripo kuita kudaro Via Cryptopay.